ကျုံမငေးမြို့က မတရားအဓမ္မကျင့်ပြီး လူသတ်မှု အဆက်
မတရား အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ် ခံရတဲ့ မဇင်မျိုးအေး မှ သဂြိူလ် မဲ့ အချိန် သချိုင်္းင်း မှာပူးကပ် ပြီး တရားခံ နာမည် အ တိကျပြောဆို ငှင်း ပူးကပ်ခံရသည့်အမျိုးသမီးက မခင်မျိုးအေးအသုဘ လိုက်ပါပို့ဆောင်သူမဟုတ် ပဲ ပထမ တခြား နာရေးပို့ဆောင်ပြန်လာသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ ( အောက်ဆုံးတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တွဲ တင်ပေးထားပါသည် )
ကျုံမငေးတမြို့လုံး တရားခံကို သ်ိနေရိပ်မိနေပေမဲ့ ရဲက မသိသေးမရိပ်မိသေး လို့ ပြောနေကြပါတယ်ဗျာ ။ ကျုံမငေးစခန်း မှုးက ဟိုင်းကြီး က ရခိုင်သား အသတ်ခံရတဲ့ မဇင်မ်ျုးအေးက လဲ ဟိုင်းကြီးကျွန်းက ရခိုင်သူ ငွေမျက်နှာကြည့် လို့ မြို့န ယ် မှာ မနိုင်ရင် အဆင့်ဆင့် တက်ပြီး တိုင်သွားမယ် စခမ်းမှုးကြီး ရခိုင် အချင်းချင်း အမှန်ဖက်ပဲလိုက်မယ် လို့ ယူဆနေ ကျပါတယ် ။
အမှန်တိုင်းမဖြစ်ရင် ဆရာဝန် ဆေးစာမှတ်တမ်းတွေ ရှိနေတာရယ် တရားခံရဲ့ ယခင် အကျင့်စာရိတ္တရယ် သူ့ ပါတ်ဝန်း ကျင်က လူတွေ သိနေခဲ့တာရယ် တခြားခိုင်လုံတဲ့ အကျောင်းတွေ ရှိနေသေးပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်တက်သွားပါလိမ့်မယ် တမြို့လုံး စိတ်ဝင်စား ဝန်းရံပါလိမ့်မယ် အသုဘ ကို တမြို့လုံးလိုက်ပါပို့ဆောင်တာကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ပေါ့ ပေါ့ လေးတွေးရင် တစ်ပွင့်တော့ ပေါ့ပေါ့ လေး ပြန်ဖြုတ်ပေး ရပါလိမ့်မယ်ဗျားးးးး video ဖိုင်နဲ့ ပြောပြသူစုံစမ်းမေးမြန်းချင်း သီးခံပါ ကျနော် ရခိုင်လူမ်ျုး မဟုတ်ပါဘူး ဗမာ ပါဗျာ ထပ် သိရင် ထပ်တ င်ပေးပါဦးမယ် အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ share နိုင်ပါတယ် ။
Source : goo.gl/8QGf2n
“မိဂွမ်း … ဘာလုပ်နေလဲ” “ရှင် … ကြမ်းတိုက်နေတာ မေမေကြီး၊ .. ပြီးတော့မယ်” “အေး .. မြန်မြန်လုပ်၊ .. အလုပ် လု ပ်တုန်း ဖုန်းမကိုင်ဖို့ ငါဘယ်နှခါပြောရမလဲ၊ … စကားနားမထောင်ရင် နင်ရွာပြန်တော့” အိမ်ရှင်ဘယ်လောက်ပြောပြော မိ ဂွမ်းတို့က ဒီဖုန်းကို လက်ထဲကမချ၊ အလုပ်ဖြုတ်ချင်လည်းဖြုတ်၊ ဒီအိမ်က ဆက်မထားလည်း နောက်တစ်အိမ်ရှာမယ်ပေါ့။ အခုတောင် ကြမ်းတိုက်ဝတ်လေး ပစ်ချပြီး selfie လေး ဆွဲလိုက်သေး။ တစ်ပုံတည်းမဟုတ် ဆက်တိုက်ကိုရိုက်တာ၊ ပုံေ တွမှတထောကြီး။ အလုပ်ကလေးအားတာနဲ့ သူ့အခန်းလေးထဲပြေး၊ ဖုန်းထဲက application တွေနဲ့ သူရိုက်ထားတဲ့ ပုံေ တွကို edit လုပ်၊ edit လုပ်တာမှ တော်ရုံလုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ application တစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ပုံကို နောက် application တစ်ခုနဲ့ ထပ် edit တာ၊ သူ့ဖုန်းလေးထဲမှာ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ application အစုံရှိတယ်၊ Photo Wonder တို့ Camera 360 တို့ကအစ Cymera အထိ အကုန်ရှိတယ်။ ပြင်တယ်ဆိုတာ အလကားမဟုတ်ဘူး။ Facebook မှာ တင်တာ၊ လူကသာအိမ်ဖော် Facebook မှာက Cele ဆိုလား ပဲ၊ Facebook မှာကလည်း ဖွန်ကြောင်တဲ့ကောင်အများသားဆိုတော့ သူ့ပုံအောက်မှာ add me sis ဆိုတာချည်း။မိဂွမ်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ပါးဖောင်းပြီးရို…
အနုပညာလောကမှာ အနုပညာ​ကြေးအမြင့်ဆုံး မင်းသမီးများ
၁. ​ဖွေး​ဖွေး ၁၉ဝ သိန်း ဝန်းကျင်​ ၂. ဝတ်​မှုန်​​ရွှေရည်​ ၁၈၅ သိန်း ဝန်းကျင်​ ၃. အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​ ၁၈ဝ သိန်း ဝန်းကျင်​ ၄. မိုး​ဟေကို ၁၇၅ သိန်းဝန်းကျင်​ ၅. သက်​မွန်​မြင့် ၁၇၀ သိန်း ဝန်းကျင်​ ၆. ​ရွှေမှုန်​ရတီ ၁၆ဝ သိန်း ဝန်းကျင်​ နဲ့ ဒီမင်းသမီးတွေပြီးရင်တော့ သ ဉ္ဇာဝင့်​​ကျော်​..ပိုင်​ဖြိုးသု…အိ​ချောပို…စတဲ့ မင်းသမီးတွေလ်းရှိပါတယ်။ အကြီးတန်း မင် သမီးထဲးမှာ စိုးမြတ်​သူဇာက အနုပညာ​ကြေးအမြင့်​ဆုံးဖြစ်​ပါတယ်။ ဒီဈေးတွေက အတိအကျမဟုတ်ဘဲ အနုပညာရပ်ဝန်းမှ ပြောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မင်းသမီး ဘယ်နှစ်ေ ယာက်ပါလည်း ပြောသွားဦးနော်။Information Credit- Myanmarmoviereviewandratings
ကန်တော်ကြီး မှ စုံတွဲ တစ်တွဲ ရဲ့အဖြစ်အပျက်
မန်းလေးကန်တော်ကြီးနော်။ဒါကတော့ကျတော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သူကြုံခဲ့တာလေးပြောပြမယ်နော်။ဒီကောင့်နာမည်ကနိုင်ဝင်းပါရည်းစားလဲတစ်ခါမှမထားဖူးဘူး။ အဲရည်းစားလေးလဲရလိုက်ရောဗျာ ကန်တော်ကြီးကိုချောင်းေ ပါက်မတတ်သွားလိုက်ကျတာ ညတိုင်းလိုလို ။ တစ်ရက်ပေါ့ အဲဒီနေ့ကစသူတို့နှစ်ယောကခုထိကန်တော်ကြီးဘက်ဆိုမသွားရဲတော့ဘူးလေ။ ကန်တော်ကြီးမြောက်ဖက်ခြမ်းအပင်လေးတွေကကွယ်နေတဲ့နေရာလေးပါ။သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောရင်းအချိန်ကုန်မှန်းမသိတော့ညကတဖြည်းဖြည်းနက်လာတာ။ စကားတွေပြောနေရင်းသူ့ကောင်မလေးကနိုင်ဝင်းကျောပေးထားတဲ့ဖက်ကိုကြည့်ပီးပြောလိုက်တာ”ဟင်အကိုကြည့်စမ်းပါဦးပေါ်တင်ကြီးကြည့်နေတာ”အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့နိုင်ဝင်းလဲတင်းသွားပီးလှည့်ကြည့်တော့”ဘယ်မှာလဲသဲကလဲဘယ်သူမှမရှိပါဘူးကွ”… သူ့စော်က ဟိုမှာလေအကိုက လဲငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကြည့်နေတာမမြင်ဘူးလား “ဘုဘောက်ပြောလို့နိုင်ဝင်းဘာမှ ဆက် မပြောတော့ဘူးစကားလမ်းကြောင်းလွှဲပီးဆက်စကားပြောနေတုန်းသူ့စော်ကတစ်ခါပြောပြန်ရော”ဟောလာနေပီအကို့”လို့ပြောပီးသူ့စော်ရဲ့ပုံစံကမကျေမနပ်ပုံနဲ့နိုင်ဝင်းကျောဘက်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုဘုကြည့်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့လူကိုလိုက်ကြည့်သလိုကြည့်နေတော့နိုင်ဝင်းလန့်လာပီသူ့စော…
ရှက်ရှက်နဲ့ ဝန်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံပါရစေ။ရန်ကုန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ လေဆိပ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမထဲမှာ မန္တလေးကိုသွားမယ့်ေ လယာဉ်ကို ကျွန်မ စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးပဲ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရန် ကုန်မြို့တွင်းကို ဆက်တဲ့ အများသုံးတယ်လီဖုန်း တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီ့တယ်လီဖုန်းက တယ်လီဖုန်းဆက်ခ မပေးရပါဘူး။ အဲ့ဒီ တယ်လီဖုန်းကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆက်နေတယ်။ သူ့နောက်မှာလည်း တယ်လီဖုန်း ဆက်ဖို့ စောင့်နေတဲ့သူ လေး ငါးယောက်လောက်ရှိတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း တယ်လီဖုန်းဆက်နေတာ ပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ မိနစ် ၂၀လောက်ကြာမှ နောက်တစ်ယောက်အလှည့် ရောက်တော့တယ်။ အဲ့ဒီ တစ်ယောက်ကလည်း ဖုန်းပြောလိုက်တာ အကြာကြီးပဲ။ကျွန်မဘေးနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပုံရတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဖုန်းပြော နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီး “အားနာမှုမရှိလိုက်ကြတာ”လို့ ခံစားရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မန္တလေးကို သွားမယ့်လေယာဉ် ရောက်လာပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ “စပီကာ”က ကြေညာပါတယ်။ မန္တလေးကို သွားမယ့်ခရီးသည်တွေ အားလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားကြတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကို သွားဖို့ ဘတ်(စ်) ကားတ စ်…
တ﻿သောင်းတန်﻿﻿ ငါးထောင်တန် ငွေ စက္ကူ ကျပ်﻿ အတု နှင့်﻿ အစစ်﻿ခွဲနည်း
တသောင်းကျပ်တန် အတုအစစ်ကို သာမန်ကြည့်ရုံမျှဖြင့် ခွဲခြားရန်ခက်ခဲပြီး အစစ်တွင် CENTRAL BANK OF MYANMAR စာတန်းပါသည့် နေရာတွင် အနည်းငယ်သာကြမ်းခြင်း၊ အတုတွင်ပါရှိသည့် လုံခြုံရေးကြိုးတွင် ခရမ်းရောင် တမျိုးတည်းရှိသော်လည်း အစစ်ရှိ လုံခြုံရေးကြိုးတွင် အ၀ါနှင့် ခရမ်းရောင်ပါဝင်ကြောင်းနှင့် အစစ်တွင် ဆေးသားေ ကာ င်းမွန်ပြီး အတုတွင် ဆေးသားပြတ်သားမှုမရှိဘဲ ဆေးသားများ ပြန့်နေကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တခုမှ လက်ေ ထာက်မန်နေဂျင်းတဦးက အတုအစစ်ခွဲခြားပုံကို ရှင်းပြသည်။ အတု က ကြိုးအရောင်မပြောင်းဘူး CBM တံဆိပ်မပါဘူး အစစ် က ကြိုးအရောင်ပြောင်းတယ် CBM တံဆိပ်ပါတယ် ဒီ ပိုက်ဆံကအတုဖြစ်ဖို့များတယ် ဂဏန်းအောက်မှာ မှင်နီနဲ့တားထားတယ် အတုတွေတွေဆိုဘဏ်တွေက ဖောက်စက်နဲ့ေ ဖာက်ပစ်တာ ဒီပိုက်ဆံကို ဒီလူတောင်းပန်ပီး ပြန်တောင်းလာလို့ ထင်တယ် မှင်နီနဲ့ပြန်တားပေးလိုက်တာ ဒီလို ဓာတ်ပုံ နဲ့ဆို အတုအစစ်ခွဲဖို့ခက်တယ် အတုထုတ်တဲ့သူတွေက တော်တယ် ဓာတ်ပုံနဲ့ကျ ကြိုးအရောင်ကတူနေတယ်။ ကြိုး အ​ရောင်​ကိုကြည့်​ပါ အတုက အနီ​ရောင်​တမျိုး ပဲ ပါပါတယ်​ ။ အစစ်​က အစိမ်းနဲ့အနီ နှစ်​​ရောင်​​ပြေး​နေပါတယ်​ ။ အခု​နောက်​ပိုင်းအတု​တွေက လက်​ရာပို​ကောင်း လာပါတယ်​…
မိန်ကလေးငယ်ငယ်​တွေသတိထားကြပါ။ နေ့ခင်း​ကြောင်​​တောင်​ပုံမှားရိုက်​ပြီး မိန်းမချင်းလုနည်းအသစ်​​ပေါ်​နေပါပြီ။ အဲ့ဒါက​တော့ ခပ်​ကြီးကြီးခပ်​​တောင့်​​တောင့်​ မိန်းမနှစ်​​ယောက်​က ခပ်​တည်​တည်​နဲ့ ရှေ့ကပိတ်​ရပ်​ပြီး ကောင်​မ လင်​ခိုးမ ဆိုပြီး ဘုမသိဘမသိ နဲ့ ဆံပင်​ဆွဲပါးရိုက်​ပြီး ငါ့လင်​ဆီကခြူထား တဲ့ပစ္စည်း​တွေ အကုန်​​ပြန်​​ပေးဆိုပြီး လည်​ပင်းကဆွဲ ထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုအတင်း ဖြုတ်​ယူတာပါ ။အပျိူ ​လေးဆို​တော့ရုတ်​တရက်​ လူမှား အရိုက်​ခံရတယ်​ထင်​ပြီး မရှင်းတတ်​ ပတ်​၀န်းကျင်​ကကြည့်​​နေ​တော့လည်းရှက်​ တဘက်​ကလည်း ဆဲနည်း​ပေါင်းစုံနဲ့ လင်​ရှား​နေလား ​ကြောင်​​တောင်​နှိုက်​ချင်​တဲ့ ကောင်​မ ဒါနမူနာဆိုပြီး လူကြားထဲ ပုံ မှားရိုက်​ပြီး ၀တ်​လာတဲ့​ရွှေချွတ်​ယူခံရ တာပါ။ ပတ်​၀န်းကျင်​အမြင်​ကြ​တော့လည်း လူမူ့​ရေးပြသနာပဲလို့ထင်​ပြီးဝင်​မပါကြတာရယ် ပြီးတော့ အသက်​ငယ်​ငယ်​နဲ့ သူများ လင်​ခိုးချင်​ တာ​နေ ပ​စေဆိုပြီး မကူညီချင်​တာရယ်​​ ကြောင့်​ နေ့ခင်း​ကြောင်​​တောင်​မှာ​တောင်​ မိန်းမချင်း​ဗြောင်​လုခံရတဲ့ ဖြစ်​စဉ်​​တွေ ရှိ​နေပါပြီ ။​ယောက်ျား​လေးဆိုရင်​လည်း ကြာကူလီ ကျူပ်​မိန်းမကြာခိုလို့ ဆိုတဲ့စကားသုံးပြီး တခါမှ …
Our Team And Condition